"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ" (The7Self Sabotages And How To Overcome Them) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျက်စီးစေနိုင်သော အချက် ၇ ချက် နှင့် ၄င်းအချက်များကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ" (The7Self Sabotages And How To Overcome Them)
Author: lubo601 | 8:26 PM | No မှတ်ချက် |
သင့်မှာ ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မရည်ရွယ်ပဲ ဖျက်ဆီးမိသူ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
1. I don't know what I really want
2. I don't deserve it
3. I don't have time, money or resources.
4. It's too difficult
6. They don't want me to ...
- သင်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖျက်စီးမိနေပြီလား၊
- အပေါ်ထဲက အချက်ဘယ်နှစ်ချက်တိုက်ဆိုင်လဲ၊
- ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မယ် စဉ်းစားလဲ၊
- အဲဒါလေးတွေ တွေးပြီးပြုပြင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက်လေးတွေပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာကို ရွေးချယ်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ မအားလပ်လို့ တစ်ဦးချင်း Reply မလုပ်ပေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
တိုနီရော်ဘင်ကပြောပါတယ်။ အခြားအရာတွေအားလုံးထက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေတွေက ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ ရဲ့ ခရီးပန်းတိုင်ကို မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့အများစုရဲ့ ဆင်ခြေတွေက ဟိုဟာမရှိလို့ ဒီဟာမရှိလို့ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက အခွင့်အရေးပိုရတယ်၊ ဗီဇအရပိုတော်တယ်၊ ပညာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ငွေကြေးနဲ့ မိသားစုအနေအထားတွေမှာ သာတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ အိပ်မက်တွေကို ရအောင်လုပ်သွားသူတွေမှာ ရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀အခြေအနေနဲ့ မကွာခြားလှပါဘူး။ သူတို့မှာ ပိုမြင့်တဲ့ IQ မရှိဘူး၊ သူတို့ပညာပိုမတတ်ဘူး၊ သူတို့မှာ နောက်ခံအင်အား သင်တို့ထက်ပိုမရှိပါဘူး။ သူတို့မှာ အိပ်မက်ကြီးကြီးမက်ဖို့နဲ့ အဲဒါတွေကို ရအောင် လုပ်ဖို့ တိတိကျကျ နည်းလမ်းတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ လေ့လာသင်ယူပြီး အသုံးချသွားကြတာပါ။
ဘ၀မှာ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ဖို့ပဲ အချိန်တွေ လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် အဖြစ်များကြတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက Goal Conflict ဆိုတဲ့ ဘာကိုလိုချင်မှန်း ကွဲကွဲပြားပြား မသိကြတာပါ။ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ တစ်ခုခုနဲ့တစ်ခု သဘောတရားမတူတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေထားရှိတာပါပဲ။ ဥပမာ - လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ စွန့်စားမှုလည်းမလုပ်ချင်ဘူး၊ လွတ်လပ်မှုလည်း လိုချင်နေတာမျိုးပါ။ ဒီလိုဖြစ်တာက တစ်ခါတစ်ရံမှာ သဘာဝကျတတ်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ပြီးဆုံးအောင် မလုပ်နိုင်ပဲ ဆင်ခြေပေးတဲ့အနေနဲ့လည်း သုံးတတ်ကြပါတယ်။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကိုယ့်ဘ၀မှာ တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကို သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို အချိန်ကာလအလိုက် လုပ်ချင်တာတွေ သတ်မှတ်ခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများကို ပြုလုပ်တာဟယ ဒီအခြေအနေမျိုးကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
လူသားတွေမှာ ရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဟာ အခြားသူတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်တောင်းယူတာပဲ။ အခြားသူတွေ ခွင့်မပြုမှာကို စိုးရိမ်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြီးကြီးမားမား ဖျက်ဆီးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေ သင့်ကို ဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် သင်ရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာ သင့်ဘ၀သင် တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ထားတဲ့စိတ်ဟာ အခြားသူတွေဆီက ခွင့်ပြုချက်ရယူမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အတင်းအကျပ် အစားထိုးခြင်း ခံရပါတယ်။ သင့်ဘ၀မှာ ရှိတဲ့သူအများစုဟာ သင့်ကို ကူညီချင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာကို သဘောမပေါက်ကြပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ သင့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အခန်းဖော်များကို သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာ သင်ပြပေးလို့ ရပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအပြင် Personal Coaches, Counselors, Mentors, Teachers စသူတွေကို ရှာဖွေ အကြံဥာဏ်ယူခြင်းဟာလည်း သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။
ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေကို စိတ်ရှည်ခြင်း၊ အချိန်ယူကြိုးစားခြင်းနည်းတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာ အောင်မြင်မှုလေးတွေ လေးစားလောက်စရာ စပြီးရလာပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေဟာ မြင့်တက်လာနိုင်ပြီး ပိုမိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ မိမိရည်မှန်းချက်ကို ရအောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ အဲဒီ ရည်မှန်းချက်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေ မဖြစ်လာသေးသည်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်ကို လေးစားကြည်ညိုစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေအပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု မြင့်လာလေလေ ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်လေလေပါပဲ။
Naing Win Aung, MBA (UK)